လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်(၂)… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်(၂)…
Posted by ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း on May 30, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Copy/Paste, Myanma News, News | 13 comments
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ (၂၄)နှစ်တာအတွင်း ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ် ထိုင်နိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
သူရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် ထိုင်းအထူးရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ယူထားပါတယ်။မဟာချိုင်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားများကိုလည်း အားမငယ်ကြဖို့၊စည်းကမ်းရှိကြဖို့မှာကြားသွားပါတယ်။လုံခြုံရေးကိုတော့ အထူးဂရိုက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။။ဇွန်လ(၁)နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ကမ္ဘာ့စီပွါးရေးညီလာခံမှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းပြည်သူအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းသာပါကြောင်းနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသာမကပဲ ဒေသတွင်းအရေးကြီးတဲ့ ခရီးစဉ်ဖြစ်ကြောင်းကို ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အထက်လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ ခရိုင်ဆက်က ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဇွန်လ(၂)နေ့မှာ မယ်လ ဒုက္ခသည် စခန်းသို့သွားရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။။။
ဓါတ်ပုံများကို…MyanmarCelebrity.com မှ ရရှိပါသည်။
ကျေးဇူးပါဘဲ မောင်သုညရေ။ :-)
ကြည့်ရတာ တကယ် တလေးတစား နဲ့ ရှိလို့ ကို လုံခြုံရေး ကို အတော်လေး ဂရုစိုက်ပေးနေပုံဘဲ။
တစ်ခြား နိုင်ငံ တွေ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဒီလောက်ကြည်ညိုတာ အလကား တော့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိသင့်တယ်။
နှစ်ရှည် အကျဉ်းချခံထားရလို့ နာမည်ကြီးတာ ထက် အဲဒီမတိုင်ခင် အရင်တုန်းက ကထဲ က သူ့မှာ အရည်အသွေး အပြည့်ရှိတာကို သူတို့ သိထားလို့ပါ။
ဒါထက် – ဒီလင့် ထဲက မှတ်ချက် နံပါတ် ၆ ကို ကြည့်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှေ့က ကိုယ်ရံတော် လုပ်ပေးနေတဲ့ ယိုးဒယားမလေး ကို အတော် မိုက်သကွဲ့။ ;-)
အရီးခင်လတ်ရေ. အမေစုရှေ့ ကကောင်မလေးက အတော်ကို လှပါတယ်ဆိုတာထောက်ခံ၏။
တော်တော် ဖြောင့်တဲ့ ကိုယ်ရံတော်တပ်မှူးလေးပါဗျ။
.. မဉ္ဖူသက နတ်ပန်းမဟုတ်တာ.. သေချာတယ်..
တောက်(စ်) (၃ကြိမ်မြောက်ပါ “ဂဂ” ရေ)
သူကြီး တို့နဲ့များ ကွာပါ့ရှင်။
ဟိုက ဗျင်းလွှတ် လိုက်မဲ့ ရုပ်လေး။
မြန်မာပြည် ထဲမှာလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် အဲဒါမျိုးလေး တစ်ယောက်လောက် အနီးကပ်ခန့် ထားပေးချင်ပါရဲ့။
ဟယ်လာရီ လာတုန်းက လဲ သူ့ဘော်ဒီဂတ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက် မျက်နှာ တင်းတင်းနဲ့။
တားတားတို့ အရွယ်ဝတ်ကလေးပဲ …
ဒါပေသိ …ယပက်လက် ဆိုတော့ ကြောက်ကြောက်
မရွှေထား စဉ်းစားမယ် ဆိုရင်တော့ …
မိတ်အင် ချိုင်းနားဘဲ ကောင်းဘာဒယ်အေ…
Nga Pein says:
ဒေါ်စုကဒီလိုပဲ အတိုက်ခံပါတီနေနဲ့ ပဲလုပ်..ပြီးတော့ဦးသိန်းစိန်က..နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရင်အကောင်းဆုံးပဲ..
ဦးသိန်းစိန်က အုပ်ချုပ်ရေးမှာအတွေ့ ကြုံတော်တော်ရှိတယ်..
အန်အယ်ဒီကသဘာရင့်တဲ့အန်ကယ်ကြီးတွေကိုလည်းတော်တော်လေးစားပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ဇေယာသော်လိုလူငယ်ကိုတော့ hip hop ,R&B သီချင်းတွေမှာထူးချွင်ပေမဲ့.. နိုင်ငံရေးမှာတော့ သူ့ ကို confidence မရှိဘူး..ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့..နိုင်ငံရေးဟာ..show ပွဲမဟုတ်ဘူး..အတွေ့ ကြုံမရှိလို့decision ချမှားသွားရင်. အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ကြမှာ..ပြီတော့..
God bless ASSK
God bless President U Thein Sein,, I like both of you.. Keep working ~
ခါးမှာဗျောက်ချိတ် အမိန့်ပေးတိုင်း အုပ်ချုပ်တတ်တယ် ထင်နေလား.. အဲလိုဆို ငါလည်း ဘောင်းဘီချွတ်ပြပီး လူတဂါကို ခိုင်းစားမယ်…။ သောက်ရူး…. :mad:
ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်စု ကိုယ်စီကိုယ်စီမှာ. သာမာန်လူထက်ဆွမ်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်..
ခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာ..ဦးသိန်းစိန်မဟုတ်ဘဲ ..ဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရင်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေချက်ချင်းကြီးကောင်းလာမယ်လို့ ထင်လဲ ?? အိုဘားမားကိုပဲလာလုပ်ခိုင်းကြည့်အုန်း..ချက်ချင်းဖြစ်နိုင်ရဲ့လား..??
နိုင်ငံတနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ ဆိုတာ..ညချင်းပေါက်..လုပ်လို့ မရဘူးလို့ ထင်ပါတယ်.. အယ်သူ့ ကိုမဆို အချိန်ပေးသင့်ပါတယ်..
ဘယ်သူ့စေခိုင်းချက်မှ မပါပဲ ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ် ထွက်ကြို နှုတ်ဆက်ကြတဲ့ … ဓါတ်ပုံတွေ တွေ့ရတာ အရမ်းအားရတာပါပဲ ။ အဲ့ဒါကမှ လူထုရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ … ဘယ်သူလဲလို့ …ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်စေပါတယ် …. ။
အရှေ့တောင်အာရှ မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေသာမက၊ နိုင်ငံခြားသား တွေရော၊ နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ celebrity တွေရော လေးစားရတယ့် အသိအမှတ်ပြုရတယ့် အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင် ဟာ မြန်မာမှပဲရှိပါတယ်။
သိတ်ပြီးအချီုးမပြေတဲ့..ဘောင်းဘီချွတ်ပြပီး လူတဂါကို ခိုင်းစားရဲတဲ့..သောက်ရူး
မြန်မာလူမျိုးများပီသစွာ၊ကွန်မန်းများကို ယဉ်ကျေးသိမ်မွှေ့စွာ ရေးသားပေးပါရန်အထူးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား….
သို့ ..မောင်သုည **okay, ကြိုးစားပါ့မယ်..